भारतीय कुटनीतिज्ञ भन्छन्ः भारतले नेपालमा हिन्दूवादी आन्दोलनलाई मलजल गर्दैछ ! » देशपाटी
भारतीय कुटनीतिज्ञ भन्छन्ः भारतले नेपालमा हिन्दूवादी आन्दोलनलाई मलजल गर्दैछ !
नयाँदिल्लीः नेपालबारे जानकार मानिने भारतीय कुटनीतिज्ञ एस डी मुनीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले सावधानीपूर्वक र चलाखीपूर्ण तरिकाले कार्ड खेलिरहेको बताएका छन् ।
’यी गतिविधिहरुबाट भारतले आफ्नो तात्कालिक र रणनीतिक लक्ष्य हासिल गरेको छ,’ मुनीले लेखेका छन् । यस्तै उनले ओलीको अवसरवादी र राजनीतिक रुपमा भारतविरोधी राष्ट्रवाद पनि उजागर भएको दावी गरेका छन् । साथै कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र प्रभुत्व भत्किँदा यसको संरक्षकको रुपमा चीन लज्जित भएको पनि उनले आरोप लगाएका छन् ।